November 2011 | နေမင်းဇွဲမာန်
at Wednesday, November 30, 20119comments
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်ဆုံးမြစ်ကြီး ၁၀ စင်း
10. Zaire River
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဟန်းနီးမွန်းခရီးထွက်ရန် အကောင်းဆုံး နေရာ ၁၀ မျိုး
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ ....
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ .....
ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေး ကွန်ယက် အများဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ ......
2011 တွင် အကောင်းဆုံး Netbook ၁၀ မျိုး ....
ကမ္ဘာပေါ်တွင် Facebook သုံးစွဲသူ အများဆုံးရှိသည့် နိုင်ငံများ ....
အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် အရေအတွက် အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နိုင်ငံများ ....
Number Of Billionaires : 26
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ မရရှိခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာလူချမ်းသာစာရင်းဝင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့သူများ ...
He has the worldwide business of chocolates “Ferrero Rochers”. His total wealth is $17 billion.
Facebook ကို ပထမဆုံး စတင်သုံးစွဲခဲ့သူ ၁၀ ဦး ...
ကမ္ဘာ အသက်အငယ်ဆုံးနှင့် အချမ်းသာဆုံး အင်တာနက်ပညာရှင် ၁၀ ဦး ...
2011 အတွက် အကောင်းဆုံး laptop 10 မျိုး ......
Microsoft မှ အကောင်းဆုံး window7themes ပုံစံများ........
10. SiCo for Windows7Theme
ကမ္ဘာပေါ်တွငိ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးအားကစားသမား ၁၀ ဦး
ကမ္ဘာပေါ်တွငိ အလှဆုံး ကျွန်း ၁၀ ကျွန်း ....
ကမ္ဘာပေါ်တွငိ အလှဆုံး တံတား ၁၀ စင်း....
ဒီတံတားကတော့ လန်ဒန်မြို့ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး အထင်ကရတွေထဲက တစ်ခု ဖြစိပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း အထင်ရှားဆုံးလို့ သက်မှတ်ထားတဲ့တံတားတွေထဲက တစိစင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတံတားကတော့ ၁၉၃၇ ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ပေပေါင်း ၈၉,၂၁ ပေ ရှည်လျားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံး ကြိုးတံတားတစ်စင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Gtalk auto reply အသုံးပြုနည်းလေးပါ...
http://www.komyat.com/ မှ ကူးယူဖော်ပြသည် ။
gtalk autoreply ပါ သိတဲ့လူလဲ သိပါလိမ့်မယ် အသုံးပြုတာကတော့ အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်
Gmail auto reply အသုံးပြုနည်း...
ကိုယ့် Gmail ထဲကို သယ်ရင်းတွေ ဆီကပဲဖြစ်ဖြစ် blog တွေကပဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်လာတဲ့ mail မှန်သမျှကို Gmail auto reply လေး အသုံးပြုထားရင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း mail လေးတွေ auto ပြန်ပို့နိုင်ပါတယ် ။
Gmail ပို့ပြီးသား ပြန်ဖျက်နည်း...
ပုံ ၁ ကိုယ့် Gmail ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ ပြိးရင် Gmail ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင်နားကနေ
Labs ဆိုတာထဲကိုဝင်ပါ ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းမှာ gmail acount လေးတွေ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝင်သုံးနိုင်ရန်...
Gmail account လေးတွေထပ်ခွဲရအောင် ။
ပထမဦးဆုံး မိမိ Gmail Setting ထဲကို အရင်သွားလိုက်ပါ ။
Google Account Settings ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် ။ click လိုက်ပါ ။
Remote Desktop အသုံးပြုပုံလေးပါ .....
ကျွန်တော်လည်း remote desktop နည်းနဲ့ အသုံးပြုလို့ရတာလေးတွေ ပြောခဲ့ချင်ပါတယ်။ အခြား ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲကို
remote destop သုံးပြီးဝင်လိုက်မယ် ဆိုရင် ကိုယ်ဝင်လိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ desktop ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ ၊ အချက်အလက်တွေ
အမျိုးသားများအတွက် Valentine Day စကားလက်ဆောင်
at Sunday, November 06, 20113comments
ယောက်ျား နှင့် မိန်းမ
1.You will receiveabody.You may like it or hate it but it will be yours
for the entire period this time around.
မိသားစုဝင်နည်းနည်းနဲ့ အဆင်ပြေမှုတွေ ပိုများလာတယ်၊ ဒါပေမယ့် အချိန်တွေ
ကျွန်တော်တို့မှာ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေများများ ပိုင်ဆိုင်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်